ဘူတာတစ်ခုစီတွင်ဆင်ခြေလျှောတည်ငြိမ်မှုသည်inရိယာရှိဆင်ခြေလျှောနှင့်ကျောက်တုံးများအပေါ် မူတည်၍ ကျောက်သား၏မာကျောမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပဏာမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အတိုင်ပင်ခံသည် လျှော 6.0 အစီအစဉ်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အချက်အလက်များပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အကြံပေးသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်စုဆောင်းရန်သွားသောအခါစီမံကိန်းတွင်အဆင့် ၄ နှင့်ထောင့် ၄၅ မှ ၇၆ ဒီဂရီသို့မဟုတ် ၁: ၁ မှ¼: ၁ နှင့်ဆင်ခြေလျှော (X: Y) အကြားရှိကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ဆင်ခြေလျှောအမြင့်သည် ၅.၀ မှ ၁၀.၀ မီတာအထိရှိသည်။
ဆင်ခြေလျှောတည်ငြိမ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်စွယ်စုံနံပါတ် ၁: ၁ နှင့် 1: 1 လုံခြုံမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ မှ ၈ သည်ရေရှည်အခြေအနေများအတွက်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေတွင်လုံခြုံမှုရှိသည်။ အသုံးပြုမှုကာလကဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်¼: ၁ ၏စောင်းတွင်အသုံးပြုနေစဉ်လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မသင့်တော်ပါ။
ကျောက်ခင်းခင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏မျက်နှာပြင်ကာကွယ်ခြင်းသည်တောင်တန်းများမှဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ခင်းကျောက်ခင်းကျောက်ခင်းပုံပေါ်ကျသောကျောက်တုံးများကိုကာကွယ်ရန်ကျောက်တုံးများကျခြင်းမှကာကွယ်သည့်ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ဘေးထွက်ဆင်ခြေလျှောတွင်ပေါက်သောအပင်များသည်မြေဆီလွှာပျက်ဆီးမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးပြီးထိုဒေသရှိဒေသတွင်းအပင်များစိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ၆၀ ဒီဂရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော gradient အချိုးသို့မဟုတ်တောင်ထူထပ်သောရိယာသည်၎င်းသည်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ထို့ကြောင့်ရေနုတ်မြောင်းများကိုဆင်ခြေလျှော ရိယာအတွင်းသို့လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းရန်ကူညီရန်အတွက်ဆင်ခြေလျှော၏အထပ်တစ်ခုစီတွင်ရေနုတ်မြောင်းများရှိသင့်သည်။
ဒါပေမယ့်စိုစွတ်သော ရိယာမှပူးတွဲပါသော ရိယာ ဒါမှမဟုတ်မြစ်ဘေးမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မြေဆီလွှာဖြည့်တင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဥပမာမြေဆီလွှာတာတမံများ၏ကျုံ့ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည် ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကျောက်တုံးများ သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ထိန်းထားသည့်နံရံများတပ်ဆင်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်လျော်သလိုရွေးချယ်ပါ။ အလုပ်ရဲ့အတိမ်အနက်ကတော့အဓိကဖြစ်သည်
တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခွန်အား။ ထိုအခါတံတားဖွဲ့စည်းပုံ၏စတိုင် မြစ်တစ်လျှောက်တံတား :
•	တည်ငြိမ်မှုနှင့်ခွန်အား။ ထိုအခါတံတားဖွဲ့စည်းပုံ၏စတိုင် မြစ်တစ်လျှောက်တံတား ၁၉ စင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကပုံ ၄.၁ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအရှည် ၀.၄၀x ၀.၄၀ မီတာရှိသော အနေဖြင့်အုတ်မြစ်အားဒီဇိုင်းဆွဲ။ AASHTO-LRFD စံနှုန်းနှင့်အညီအင်အားသည် ဖြစ်သည်။ ဇယား ၄.၁ တွင်ပြထားသောအတိုင်းအကျဉ်းချုံး။ နောက်ထပ်တံတားကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကီလိုမီတာ 16 + 885.7877
•	ကာကွယ်မှုတိုက်စားခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ - တံတားကို Sta.16 + 885.78 ရှိတံတားကိုစဉ်းစားပြီးနောက် ၄ မီတာရှိသောရေပေါ်ဖောင်ဒေးရှင်းပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြေပြင်မှရှင်းလင်းရေး။ အဲဒီမှာအကာအကွယ်စကတ်တွေပေမယ်တိုတယ်။ သစ်တိုင်များနှင့်အပျက်အစီးများကြောင့်တိုက်မိခြင်းအခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်အတိုင်ပင်ခံသည်စကတ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထပ်မံထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အကာအကွယ်စကတ်များသည်သစ်လုံးများနှင့်အပျက်အစီးများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပို့စ်များအကြားရှိနေခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤဒီဇိုင်း၏နောက်ကွယ်အကြောင်းပြချက်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရေစီးဆင်းနေသောကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုမဖွင့်နိုင်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းရေကိုလမ်းကြောင်းလွှဲရန်နည်းလမ်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စကတ်ဒီဇိုင်း
တိုက်စားမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်။ စီမံကိန်းအတွင်းရှိရေစီးမှတိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ရန်စုစုပေါင်းအကွာအဝေးမှာ ၁၁၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။
1. Horizontal Geometric Design the consultant considers adjusting the previous design back to the Access Road at3locations, namely, the Dewahda Hill (Sta.27+250 to Sta.28+250) and the Saddle Hill (Sta.49+700 to Sta.50+850). For the Elephant Cry Hill (Sta.100+250 to Sta.103+351) consider re-alignment to decrease of high cut-fill volume
လမ်းဆုံသည် ၁ ကီလိုမီတာလမ်းဆုံ။ ၁၈ + ၅၀၀၊ စီမံကိန်းလမ်းနှင့်အဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၈၊ ပုံ ၅.၆-၆ တွင်ပြထားသည့်လမ်း ၃ ခုပါဝင်သည့်ယခင်လေ့လာမှုမှလမ်းဆုံကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၂ ကီလိုမီတာ ၅၄ + ၃၀၀ တွင်စီမံကိန်းလမ်းမကြီးနှင့်ရပ်ရွာလူထုလမ်းကိုပုံ ၅.၆-၇ တွင်ပြသထားပြီး ၃ ကီလိုမီတာ ၆၇ + ၆၆၇ စီမံကိန်းလမ်းဆုံကိုမြစ်ဆုံလမ်းဆုံနှင့်ပုံ ၅.၆-၈ တွင်ပြထားပါသည်။
စီမံကိန်းလမ်းနှင့်အဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၈ လမ်းဆုံ။
အသွားအလာလမ်းကြောင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအားဖြင့်၊ လမ်းဆုံရှိဘယ်ဘက်သို့ထွက်ပေါက်သို့သွားရန်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းများထည့်ခြင်း ဘေးကင်းစွာညာဘက်လှည့်ရန်စောင့်ပါ။ လမ်းဆုံထိန်းချုပ်မှုသည်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင်လမ်းအသုံးပြုသူများ၏လုံခြုံမှုနှင့်အများဆုံးထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်။ လမ်းညွှန်အတွက်ဆိုင်းဘုတ်များထည့်ပါ မှတ်တိုင်အမှတ်အသားကိုထည့်ပါ
ဤစီမံကိန်းအတွက်လမ်း၏လျှပ်စစ်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်မှစွမ်းအား ၉ မီတာမြင့်သောတိုင်တွင်တပ်ဆင်ထားသောထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများနှင့်ဘက်ထရီအရံပါသည့် LED မီးလုံးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းတွင်အလင်းရောင်စနစ်များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောနေရာများကိုဇယား ၅.၇-၁ တွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
1. Sta.16+880 to Sta.17+120 တံတားအမှတ် ၁ (အရှည် ၂၄၀ မီတာ)
- လမ်းဆုံအမှတ် 1
ခွန်ကောက်ဂိတ် 1 နှင့်ရုံးအဆောက်အ ဦး၊ လူသွားလမ်း၊ ကားရပ်နားရန်နေရာ၊
မီတာ ၂၀၀ အကွာအဝေးတွင်အလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သတိပေးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်း (နေရောင်ခြည်ဆဲလ်) တပ်ဆင်ခြင်း
5. Sta.69+050 ကားရပ်နားရာနေရာတွင်လမ်းဘေးနေရာထိုင်ခင်းသည်အလင်းရောင်ပါ ၀ င်သည်။ ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ အိမ်သာများ၊ ဘုံနေရာများ၏အလင်းရောင်အတွင်းရှိလမ်းများ
အခွန်အကောက် ၂ နှင့်ရုံးအဆောက်အအုံ၊ စင်္ကြံ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာ၊
အတိုင်ပင်ခံသည်ယခင်ဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရာ၌ဘေးကင်းရေးကိုအလေးထားခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်မတော်တဆမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရာထူးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားအင်ဂျင်နီယာအခြေခံမူများအရဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
1. ထရပ်ကားများသို့မဟုတ်တောင်တက်လမ်းကြောအတွက်အပိုဆောင်းလမ်းကြောင်း။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံအဆိုပါတောင်တက်လမ်းသွားအပေါ်စံနှင့်အတူအပိုဆောင်းလမ်းသွားဒီဇိုင်းစဉ်းစားမိတယ်။ အပိုဆောင်းလမ်းကြောလိုအပ်သောနေရာများသည်ရှည်လျားပြီးကုန်းမြင့်သို့တက်ရမည်။ ယာဉ်များ၊ အထူးသဖြင့်ထရပ်ကားများ၊ အမြန်နှုန်းဆုံးရှုံး။ ကျော်တက်ခြင်းသည် ပို၍ အန္တရာယ်များသည်။ စုစုပေါင်းအကွာအဝေး ၅.၂၈ ကီလိုမီတာရှိသောထပ်မံလမ်းသွားလိုအပ်သည့်နေရာ ၇ နေရာရှိသည်။ ပုံ 5.8-1 မှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
2. လမ်းဆုံမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒီဇိုင်း။ လမ်းဆုံနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်အ ၀ င်အထွက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေ။ အလှည့်ကျစေရန်အတွက်စောင့်နေသည့်ယာဉ်များကိုပြုလုပ်ပါ။ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ယာဉ်အသွားအလာအခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရဤလမ်းဆုံနှစ်ခု (အမှတ် ၁ နှင့်နံပါတ် ၃ လမ်းဆုံ) သည် ၂၀၃၇ ခုနှစ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာလိုအပ်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုသည်အင်ဂျင်နီယာစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလမ်းဆုံထိန်းချုပ်မှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းတွင်အကြံပြုခြင်းနှင့်သတိပေးခြင်း၊ အထွက်နှုန်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အဝါရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အလင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
3. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာများ။ ယခင်ဒီဇိုင်းတွင်လုံခြုံသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည့်သံမဏိရောင်ခြည်ကိုယ်ရံတော်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောကွန်ကရစ်အတားအဆီးများရှိသည်။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံကဲ့သို့သောပိုမိုလုံခြုံပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်း
သတ်မှတ်ထားသောအရေးပေါ်ကားရပ်နားရန်နေရာ ၃ ခုရှိသည်။ ပုံ ၃.၈-၂ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကီလိုမီတာ ၃၂ + ၇၅၀ ကီလိုမီတာ ၉၈ + ၆၀၀ နှင့်ကီလိုမီတာ ၁၂၈ + ၅၀၀ ။
ရောင်ပြန်တံ, လမ်းတွင်အသုံးပြုသောလမ်းတုံးသည်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖန်လုံးလုံးဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုနေရာဒေသလိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်နှစ်မျိုးရှိပြီးအဝါရောင်လုံးများကိုအစွန်းမျဉ်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအဖြူရောင်ကိုလမ်းသွားပိုင်းခြားထားခြင်းဖြစ်ရမည်။ ကိုမှာတပ်ဆင်3လမ်းဆုံနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအချက်များ
4. ယာဉ်အသွားအလာတံဆိပ်, အကြံပေးသူသည်အန္တရာယ်ရှိသောမျဉ်းကြောင်းများအတွင်းအပိုယာဉ်အသွားအလာဆိုင်းဘုတ်များဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ လမ်းကြောင်း (၃) ခုနှင့်အသစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလမ်းဆုံများကိုနေရာ (၃) နေရာတွင်ညှိနှိုင်းနေစဉ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာဆိုင်ရာအမှတ်အသားများသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
5. လမ်းအမှတ်အသားများ လမ်းမကြီးကဲ့သို့သောအသွားအလာဆေးသုတ်ခြင်း (လမ်းခင်းအမှတ်အသားများ) ။ အပြင်ဘက်နယ်စပ်၊ အစိုင်အခဲလိုင်းအတွင်း၊ မြှားစသည်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများ၌သတ်မှတ်ထားပြီးအပြင်အရှိန်နှေးစေရန်နောက်ထပ်သတိပေးလိုင်းများ၏ဒီဇိုင်းများလည်းပါရှိသည်။ နှေးနှေးအတွက်အသုံးပြုရန် ပုံ ၅.၈-၄ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုအန္တရာယ်ရှိသောနေရာ ၂၀ တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
6. ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်ရွေ့လျားသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းလုံခြုံမှုနှင့်အဆင်ပြေစေရန်စီမံရန်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ဒေသခံနှင့်ဖြတ်သန်းအသုံးပြုသူများထားရှိလိမ့်မယ်။ လမ်းကြောင်းများ၊ လမ်းဖောက်ခြင်း၊ လမ်းများ၊ တံတားများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။
7. km.156 + 075 အရွယ်အစား ၁ အသွားအလာလမ်းကြောင်းလမ်း၊ ကီလိုမီတာ ၅.၀၀ မီတာနှင့်ပခုံးနှစ်ခုလုံးအကျယ် ၁.၅၀ မီတာ၊ အကျယ် ၈.၀၀ မီတာ၊
အတိုင်ပင်ခံသည်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်လမ်းwayရိယာမှန်ကန်မှုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အတိုင်းနောက်ခံအဖြစ်ဖန်တီးထားသည်။ မြေပြင်အနေအထားနှင့်လမ်းလမ်းကြောင်း၏မြေပုံများအားလေယာဉ်ပျံဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် UAV ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောဓာတ်ပုံများမှအဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးကိုဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောသင်္ကေတများနှင့်အညီမြေပုံထဲသို့ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် 1-SW၊ ဆိုလိုသည်မှာကြမ်းခင်းသစ်သားအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအားလုံးသည် AutoCAD ပုံဆွဲ ပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။.
စီမံကိန်း၏ဘတ်ဂျက်မှာ ၃.၉၅ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
ခွန်ကောက်ပလာဇာနှင့်အနားယူရာနေရာများအတိုင်ပင်ခံသည် Sta.69 + 050 ရှိ 1 နေရာတွင်အနားယူမည့် ရိယာ၏နံပါတ်နှင့်ပထမအဆင့်တွင်သေဆုံးသူ ကို Sta.18 + 918 နှင့် Sta.155 + 750 ရှိ ၂ နေရာတွင်ဆုံးဖြတ်သည်၊ ပထမတစ်ခုမှာအစမှတ်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအဆုံးတွင်ဒုတိယကိုပုံ ၅.၁-၁ တွင်အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
ခွန်ကောက်ကောက်စနစ်၏ဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံသည်သေဆုံးသူကောက်ခံသည့်စနစ်ကိုနေရာနှစ်နေရာတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ တစ်ခုစီတွင်လမ်းကြောင်းသုံးခု (အဝင်နှင့်အဝင်) ရှိသည်။ ပုံ ၅.၁-၃ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကုန်တင်ကားများအတွက်လမ်းကြောင်း ၂ ခုနှင့်မော်တော်ယာဉ်အသေးများအတွက်တစ်ခုစီ၊ လမ်းကြောင်း ၆ ခုပါဝင်သည်
ငွေသားပေးချေမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောခွန်ကောက်ကောက်စနစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း (Visa Master စသည်ဖြင့်) နှင့်အနာဂတ်နည်းပညာများဖြစ်သော QR-Code ငွေပေးချေမှု၊ ကူပွန်များ၊ အထူးဖြတ်သန်းခြင်းများသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ (စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်း) စသည်တို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ပေးဆောင်ရမည့်ငွေပေးချေမှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ယာဉ်ကြောထိန်းချုပ်သူ ကွန်ပျူတာစနစ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်ပုံရိပ်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း (DVES) စနစ်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (RTO) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်းစနစ်များ၊ TOD (ခရီးစဉ်တာဝန်) ကွန်ပျူတာစနစ်တံခါးပေါက် (ပလာဇာကွန်ပျူတာစနစ်: PCS) ဆက်သွယ်ရေး (အင်တာကွမ်း) အသံကြေငြာခြင်းစနစ်လုံခြုံရေးကင်မရာစနစ်၊ CCTV နှင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုံခြုံရေးစနစ်စသည်တို့။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် နေရောင်ခြည်မှစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အထူးဆီမီးကွန်ဒတ်တာမှပြုလုပ်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်မှထုတ်လုပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်လက်ရှိလည်ပတ်နေသော +/- ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဘက်ထရီများနှင့် များတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ် နှင့် လုပ်ထားသည် စွမ်းအား.
အနားယူရန်နေရာအနားယူရန်နေရာမှာ ၀ န်ထမ်းအဆောက်အ ဦး များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ စားသောက်ခန်းမများ၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ လောင်စာဆီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နေရာများနှင့်တနင်္သာရီမြစ်၏လှပသောရှုခင်းများကိုပုံ ၅.၁၁-၁၅ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထားဝယ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဂေဟစနစ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆက်သွယ်မှု (WWF အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၆) ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဒီဇိုင်းလက်စွဲစာအုပ် (WWF အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၆) နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည် ဖြတ်ကျော်ရာထူးများကိုသတ်မှတ်ရာတွင်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းသတိရသင့်သည်။ မြစ်များ၊ ချောင်းများနှင့်တံတားများတလျှောက်လုံခြုံစိတ်ချရသည်။ ပုံ ၅.၁-၁ ၌ရှိသကဲ့သို့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဖြတ်ကူးမှု (၁၂) ခုရှိသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖြတ်ကျော် RC ။ အရွယ်အစား ၃.၆၀ x ၃.၆၀ မီတာရှိသော သတျတေ ကျောက်တံတား သည်ပုံ ၅.၂-၃ တွင်ပြသထားသည့်ရှဥ့်ကဲ့သို့သေးငယ်သောတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
တံတားဖွဲ့စည်းမှုအောက်ရှိတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဖြတ်ကူး။ ပုံ ၅.၁၂-၄ တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း ၁၀ နေရာတွင်မော်တာအုတ်ကျင်းပုံစံရှိသည်။
ခြံစည်းရိုးပုံ ၅-၁၂-၅ တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းအကာအရံအရှည်အနည်းဆုံးမီတာ ၅၀၀ (2 ကီလိုမီတာ./ တည်နေရာ) ကိုတပ်ဆင်ပါ